Famokarana firavaka vita amin'ny vy vita amin'ny vy CNC | PTJ Shop
Home > Karazana fitaovana > Fanamboarana metaly
PRECISION ALLOY CNC MORATRA ARY NISY FIVORIANA
Serivisy fanamboarana faritra tsy misy fenitra ho an'ny singa kely sy lehibe ary mavesatra.
Rehefa misafidy ny hanao mpisava lalana amin'ny fampiasana alloys vaovao ny indostria vaovao dia miantso ny PTJ Shop ho an'ny vokatra nentim-paharazana izy ireo: famatsiana azo antoka ireo singa avo lenta avo lenta.
PTJ dia manana laza tsara amin'ny fametahana amin'ny metaly soa aman-tsara ny metaly izay tian'ny mpamokatra sasany tsy hitantana. Ny mpanjifa dia afaka mamolavola am-pahatokisana amin'ny fitaovana vaovao, azo antoka amin'ny fahalalana fa ny PTJ dia afaka milina na dia ny alika hafakely sy hafanana avo lenta indrindra aza ho an'ny vokatra mahomby sy lafo.
PTJ Supply Metal firaka sy serivisy fanodinana vy vita amin'ny vy. Manam-pahaizana manokana amin'ny fanetezam-boaloboka, famonoana, famolavolana, fantsom-bokatra, fantsom-bozaka, fisavana landy ary famonoana vovoka Ny fitaovana niasa dia ny karbaona sy vy tsy misy fangarony, galvanneal ary galvanized, ary ravina aluminium, varahina, ravina voaravaka, vy nitarina, harato tariby, ary bar fisaka, zoro ary tahiry boribory. Injay koa ny injeniera ao an-trano, ny fanakodia, ny famaohana, ny famaranana ary ny fizahana. Ampiasaina ny presse punch cnc turret, press frein, bender tube ao an-trano, fastener azo ampidirina, ary fitaovana fanaraha-maso.
Vitsy ny fitaovana mora entina milina noho ny firaka, noho izany ny mpividy singa an-tsokosoko hendry dia misafidy ny mpamatsy vy azy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana singa manapa-kevitra tsotra: iza no azoko itokisana hamoaka ireo vokatra milina ilaina milina ilaiko tsara rehefa tadiaviko izy ireo?
Contact ny ampahany amin'ny firaka masinista anio mba hiresaka momba ny mombamomba ireo faritra sarotra aminao.
1.Custom mpanamboatra vokatra vita amin'ny masinina ary niova ho faritra. .
Ny vokatra isan-karazany dia misy kirihitra, vozon'akanjo, mpampifandray, pin, shaf, spacer ary valves. Alika vy, aliminioma, varahina, alimo varahina, vy vy, vy ary varahina vita amin'ny vy tsy ampiasaina. Ny halavan'ny ampahany indrindra dia 4 amin'ny., Raha ny savaivony ivelany kosa dia afaka manomboka amin'ny 5/16 ka hatramin'ny 4 3/4 in. Ny fahaiza-manao dia misy serivisy fanodinana volo toy ny mankaleo, mikororosy, mihady, mitoto, manodina, milina, manafosafo, mamerina manamboatra, ary mihodina. Aerospace, fambolena, fananganana, fiara, elektronika, herinaratra, fitsaboana, tafika ary indostria hafa nanompo. NADCAP, ISO 9001: 2008, AS9100, ary TS 16949: 2009 voamarina.
2.Custom mpanamboatra ny faritra milled.
Ny fitaovana dia misy alimo, beriliyum, varahina, vy vy, kobalta, varahina, vy, firaka, ABS, acetal, nylon, PTFE sy ny hafa. Mahay mitantana ampahany hatramin'ny 12 in. L x 12 in. W x 12 in. H refes manana +/- 0.0001 in. Fandeferana. Ny fahaiza-manao isan-karazany dia misy ny fanapahana, ny fametahana, ny fihodinana, ny fandavahana, ny fikikisana ary ny fanaovan-tsimbadika. Ny serivisy faharoa dia misy ny fivorian'ny, ny fikaonan-doha, ny fanindriana, ny famerenana amin'ny laoniny, ny plating, ny passivating, ny fanodinana ary ny hafa Ny spécialité, kely na lehibe na famokarana betsaka dia azo atao. Aerospace, fambolena, maritrano, simika, nify, ranomasina ary indostria hafa natolotra. Misy serivisy maika sy maika. Mankato ny fenitra AS. Fanaterana ara-potoana.
3. Serivisy fanodinam-bolan'ny cncra 5-axra marina ho an'ny faritra firaka.
AS9100 / ISO 9001 mpanamboatra mari-pahaizana voamarina: ny fahaiza-manao dia misy ny fikosoham-bary, ny honing ary ny welding. Ny serivisy fitotoana an-tany, ny fivoahana ary ny fikolokoloana dia azo alaina ihany koa. Mety amin'ny fandeferana henjana sy geometry sarotra. Nekena ny fisie CAD / CAM. Fanaterana ara-potoana.
Asaina ianao hiaina izany fahaiza-manao asa fitoriana izany. Mifandraisa aminay raha hamaly haingana ny tetikasan'ny milina faritra misy anao.
Contact ny Fivarotana milina cnc hiresaka momba ny filanao ampahany ilaina androany.